I-Semalt - I-Warrior Forum In Marketing Today
Kunezindawo eziningi zokuxhumana nabantu kanye nezinkundla ukuze uthole ulwazi mayelana nokukhangiswa kwe-intanethi, kodwa indawo ethandwa kakhulu yiForam Warrior, eyaziwa nangokuthi i-WF. Njengomthengisi we-intanethi noma wezokuxhumana, kufanele uqaphele okwenzekayo nxazonke nokuthi ungazuza kanjani ebhizinisini lakho le-intanethi ngendlela engcono. Kuphephile ukusho ukuthi iForam ye-Warrior iyinhlangano yesikhulumi esiwusizo esikusiza ukwazi konke mayelana nezinkampani ze-intanethi.
Kunzima ukungasho ukuthi iForam ye-Warrior inezinzuzo zayo kanye nezinkinga zayo. Into engcono kakhulu ukuthi lesi sithangami sihlala sisasebenza njalo futhi sinempendulo cishe yonke imibuzo ehlobene nokumaketha.
Yehla ezitatimendeni ezingezansi kusuka ku-Igor Gamanenko, onguchwepheshe ophezulu we Semalt , ukuze uthole izimpendulo ezifanele kumbuzo wakho.
1. Igumbi leMpi
Igumbi leMpi liyingxenye ekhokhelwe yalesi sithangami futhi linikeza ulwazi oluwusizo mayelana nemikhiqizo engenamuthi. Lapha abantu abahlakaniphile nabathengisi be-intanethi baxhaphaza izandla bese bexoxa ngezinhlelo zabo zansuku zonke, kodwa akunakwenzeka ukuba ujoyine lesi sigaba uze ukhokhe imali yobulungu.
2. Ujoyine ama-Famous Businessmen
Abantu abahloniphekile abaye banikezwa kulesi sigaba yiRand Fishkin (uMo), uPatrick Sexton (Feed The Bot), uPat Flynn (i-Smart Passive Income), uBrian Clark (i-CopyBlogger), no-Yaro Starak (Uhambo lwezentengiselwano).
Izinkinga zeForam Warrior
Izinkinga eziyinhloko kule platform zichazwe ngezansi.
1. Iphukile Amaposi we-English
Iposi eliphukile lesiNgisi ingenye yezinkinga ezinkulu ne-Warrior Forum. Ngiye ngabona ukuthi abasebenzisi abaningi kuleli qephu abakwazi ukubhala isiNgisi. amaphutha abo okupela isipelingi bese ucela usizo ezikhulwini zesiNgisi zendabuko.
2. Imibuzo Efanayo Ngokuphindaphindiwe
Enye inkinga ngale yesikhulumi yimibuzo efanayo ephindaphindiwe cishe nsuku zonke. I-Forum ye-Warrior idala umonakalo kubasebenzisi abasha nabakho abakhona njengama-newbies abuza izinto ezifana nokuthi "ukubeka kanjani iwebhusayithi," "ukwenza lo mkhiqizo usebenza kahle," njalo njalo.
3. Ubulungu Bamahhala
Iningi lwazi kulesi sithangami litholakala kubulungu bamahhala, okusho ukuthi awudingi ukukhokha noma yini ukuze ukwazi okwengeziwe mayelana namasu okusebenza ku-intanethi. Inguqulo yayo yamahhala ihlanganisa izihloko eziningi ezifana nokuthengiswa kwe-intanethi, ukumaketha okungaxhunyiwe ku-intanethi, amawebhusayithi e-commerce, i-SEO, ukumaketha kwe-imeyili, ukumaketha kwezokuxhumana nabantu nezinye izihloko ezifanayo. Kulinganisela, kunezingxenye ezingaphezu kwezingamashumi amathathu ezihlukene lapho kuxoxwa khona okuningi kwezihloko nsuku zonke.
4. I-Guru Wannabes
Emiphakathini efanayo yokubuza imibuzo, ngathola amanye ama-wannabes ama-guru lapho abantu bathanda ukuwafaka khona ngaphambi kokuba baqale amabhizinisi abo ku-intanethi. Lolu lwazi lungaba usizo kubantu abafuna ukuphefumlelwa noma abafuna ukugubha izinzwani zabo ezweni lokukhangisa kwezenhlalo.
5. I-Warrior Iyangibuza Noma yini
Lesi sigaba esisha sinokuthunyelwe okuningi okuthakazelisayo nezingxenye zengxoxo. Lapha ungakwazi ukubuza imibuzo yakho ehlobene nokumaketha futhi uthuthukise ibhizinisi lakho ku-intanethi. Kumthengisi omusha we-intanethi, lesi sigaba se-Forum Warrior sinamasu amaningi, ama-tutorials, nama-athikili ukuze azuze kuwo. Ungathatha iseluleko ochwepheshe mayelana nendlela yokuba ngabamabhizinisi abaphumelelayo ezinyangeni. Ngokusebenzisa iseluleko sabo, ungakwazi ukukhipha indlela yakho futhi ungathuthukisa ibhizinisi lakho kalula.
Ngomcebo wamasu, amacebo, nolwazi oluwusizo, iForam Warrior ilungele kulabo abafuna ngobuqotho izifundiswa mayelana nemithombo yezokuxhumana kanye nokuthengiswa kwe-intanethi. Ngisho noma ungenayo iwebhusayithi, ungajoyina le platform ukuze ufunde okuningi ekuhlangenwe nakho kwabadala bakho